COVID-19 အခြေအနေတွေမှာ ကိုယ့်ရပ်ရွာအတွက် ရှေ့တန်းကနေ ကြိုးစားကာကွယ်ပေးနေတဲ့ ကိုခွန်စိန်ဝင်းနဲ့ ကိုခွန်နေထက်တို့ နှစ်ဦးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ် - MHAA | Myanmar Health Assistant Association
“ကျွန်တော် ဒီစေတနာ့ဝန်ထမ်းအလုပ်ကိုလုပ်တာ ရနှစ်ကျော်လောက်ရှိပါပြီ။ အခုလို ကိုဗစ်ရောဂါတွေဖြစ်လာတော့ ကျွန်တော်တို့ရွာမှာ ကျန်းမာရေးကော်မတီအဖွဲ့ထောင်ပြီး လိုအပ်တဲ့ ကိုှဗစ်တုံ့ပြန်ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ ပါဝင်ကူညီပေးခဲ့ပါတယ်။” လို့ ကိုခွန်စိန်ဝင်းက ပြောပါတယ်။
အခု COVID-19 ရောဂါတွေဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာလည်း သူတို့နှစ်ယောက်လုံးက အသွားအလာကန့်သတ်စောင့်ကြည့်တဲ့ စင်တာတွေမှာ အစားအစာ၊ရေနဲ့ တခြားလိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေ ပံ့ပိုးပေးတာတွေ နောက်ပြီး ကိုယ့်ရပ်ရွာထဲကပြည်သူတွေအတွက် ကျန်းမာရေးအသိပညာပေးတာမျိုးတွေကို တက်တက်ကြွကြွ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့အနေနဲ့ လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အခြေအနေတွေပေါ်လိုက်ပြီး ဘယ်လိုအကူအညီတွေပေးရမလဲဆိုတာတွေကိုလည်း သင်ယူလေ့လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
“ထိုင်းနိုင်ငံကနေ ပြန်လာတဲ့သူတွေကို ရပ်ရွာထဲအဝင်မခံသေးပဲ ရောဂါကူးစက်မှုတွေ မရှိလာအောင် ၂၁ရက်လောက် အသွားအလာကန့်သတ်ပြီး နေခိုင်းပါတယ်။ အရင်တုန်းကတော့ ကျန်းမာရေးအသိပညာပေးတာမျိုးကို ရပ်ထဲရွာထဲကသူတွေအကုန်စုခိုင်းပြီး ပေးလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုအချိန်မှာတော့ ဒီကိုဗစ်နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ အရေးကြီးသတင်းတွေနဲ့ လိုက်နာရမယ့်အချက်တွေကို ကားနဲ့ လိုက်ပြီး ဆော်သြပေးနေပါတယ်။” လို့ ကိုခွန်စိန်ဝင်းက ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
ကိုခွန်နေထက်ဟာဆိုရင်လည်း ရပ်ရွာပြည်သူတွေကို အပြင်ထွက်ရင် နှာခေါင်းစည်းတွေ တပ်ကြဖို့၊ လက်ကို ပုံမှန်သေချာဆေးကြောပေးဖို့နဲ့ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ခပ်ခွာခွာနေပေးကြဖို့ စတာတွေကို သေချာစည်းရုံးပြောပြပေးရင်း COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ ပါဝင်ကူညီပေးနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ဘယ်နေရာမှာမဆို အခက်အခဲဆိုတာတော့ အနည်းနဲ့အများ ကြုံတွေ့နေရတာပါပဲ။
“ကိုဗစ်ရောဂါ စဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ ရပ်ရွာထဲက ပြည်သူတွေက အရမ်းကြောက်ကြတယ်။ အိမ်တွေမှာ ဧည့်သည်တောင် အဝင်မခံကြတော့ဘူး။ တချို့ဆိုရင် ဆေးခန်းသွားဖို့လိုရင်တောင်မှ အပြင်မထွက်ရဲကြဘူး။ နောက်အခက်အခဲတစ်ခုကတော့ သွားလာရေးပါပဲ။ ရွာလူကြီးထောက်ခံစာ မပါရင် ဘယ်ကိုမှ သွားလို့မရဘူး။”
ဒီလိုခက်ခဲတဲ့အချိန်ကာလမှာ စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ ကြုံတွေ့နေရပေမယ့်လည်း အဲ့ဒီလူငယ် ၂ ဦးကတော့ သူတို့ရပ်ရွာအတွက် လိုအပ်သမျှကို ဆက်လက်ကူညီပေးနေဦးမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
“ကျွန်တော် ပြည်သူတွေကို လက်ဆေးဖို့အကြောင်း ကျန်းမာရေးပညာပေးရတာကို အရမ်းကျေနပ်ပါတယ်။ လက်ဆေးတာက လူတိုင်းမှာရှိသင့်တဲ့ အလေ့အကျင့်ကောင်းတစ်ခုပါ။ လက်ကို စနစ်တကျနဲ့ ပုံမှန်ဆေးကြောပေးတာက ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါပိုး ပျံ့ပွားတာကနေ ကာကွယ်ပေးနိုင်သလို တခြားဘက်တီးရီးယားရောဂါပိုးတွေ ကူးစက်တာတွေကနေလည်း ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။” လို့ ခွန်နေထက် က ပြောပါတယ်။
[English text ]
Meet the COVID-19 frontline heroes – Khun Sein Win and Khun Nay Htet
“I’ve been working asacommunity volunteer for seven years. Because of COVID, we’ve formedahealth committee to coordinate the response activities in our village,” Khun Sein Win said.
They are helping with the distribution of food and hygiene materials in community quarantine centres and sharing health information to communities in their township during the COVID-19 pandemic. They have had to learn new skills and adjust during this period.
“People who have returned from Thailand have to stay at the quarantine centre for 21 days with strict infection control measures. We used to share health knowledge by gathering all the people together. But now, we share important COVID messages with the car,” Khun Sein Win said. Khun Nay Htet supports COVID-19 response efforts by mobilizing the community to wear masks, wash their hands, and do social distancing. But there are lots of challenges.
“People in my community feel scared of the outbreak. They don’t let guests come inside their homes. Some people even hesitate to go out and get the health services they need. Transportation is another challenge. We are not allowed to go anywhere if we didn’t have the recommendation letter from township officials.”
Despite the challenges, the two men are committed to supporting their community in these difficult times.
“I am pleased about promoting handwashing to the community,” says Khun Nay Htet. “Washing hands will not only stop the spread of coronavirus but also prevent other bacterial infections. It’sagood habit for everyone.”
#Access to Health Fund _ COVID-19 frontline heroes story